Uvavanyo lokufaka kunye nokubuyisa iilahleko- iYuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Ukulahleka komqondiso, okwenzeka kubude bekhonkco le-fiber optic, kubizwa ngokuba yilahleko yokufaka, kunye nokuvavanywa kokulahleka kokufaka kukulinganisa ilahleko yokukhanya okuvela kumbindi wefayibha kunye nonxibelelwano lwentambo ye-fiber optic. Umlinganiso wobungakanani bokukhanya obonakaliswe umva ukuya kumthombo ubizwa ngokuba luvavanyo lokubuyisa ilahleko. kunye nelahleko yokufaka kunye nelahleko yokubuyisa konke kulinganiswa ngee-decibel (dBs).
Nokuba luphi uhlobo, xa uphawu luhamba ngenkqubo okanye icandelo, ilahleko yamandla (umqondiso) ayinakuphepheka. Xa ukukhanya kudlula kwifayibha, ukuba ilahleko incinci kakhulu, ayizukuchaphazela umgangatho wesiginali ebonakalayo. Ukulahleka okuphezulu, isezantsi isixa esibonisiweyo. Ke ngoko, kokukhona ilahleko ibuya, kokukhona ukubonakalisa kuyinto esezantsi kwaye kungcono unxibelelwano.
Jera uqhubeke novavanyo kwiimveliso ezingezantsi
-Izintambo ezilahlekileyo zefiber
-Fiber iadaptha ezibonakalayo
-Ifiber iintambo zokubamba
-Ifiber i-pigtails ebonakalayo
-Ifiber splitters ebonakalayo ye-PLC
Uvavanyo loqhagamshelo olusisiseko lwefayibha lwenziwa yi-IEC-61300-3-4 (Indlela B) imigangatho. Inkqubo IEC-61300-3-4 (Indlela C) imigangatho.
Sisebenzisa izixhobo zovavanyo kuvavanyo lwethu lwemihla ngemihla, Ukuqinisekisa ukuba abathengi bethu banokufumana iimveliso ezihlangabezana neemfuno zomgangatho. Ilabhoratri yethu yangaphakathi iyakwazi ukuqhubeka noluhlu lweemvavanyo ezinxulumene nomgangatho.